Ukutshiza isikhumba esikhatywayo namhlanje kuyinkqubo ethandwa kakhulu ekuhlambulukeni nasekuvuseleleni isikhumba. Le nkqubo ikwabizwa ngokuba yi-microdermabrasion. Ngokutsho kobuhle be-salon, i-microdermabrasion inokukhuphisana neenkqubo ezinobundlobongela kunye nezindleko, ezifana neenjini zeBotox, iipilisi zeekhemikhali. Enye inkcazo ithi ukuchelwa kwe-micro-alternative kuyinto efanelekileyo yokuhlinzwa ngoplastiki, kuba iphosa imibimbi, ilwa ne-acne kwaye iphelisa izikrakra.
Isiphumo se microdermabrasion
Ngokungafani nokugqithisa iziqhamo ze-acid, i-microdermabrasion yenza ngokunyanisekileyo, kodwa xa kuthelekiswa nokupakishwa kweekhemikhali okanye ukuhlinzwa ngoplastiki, i-microdermabrasion yindlela elula. I-Microdermabrasion iyakwazi ukusombulula iingxaki ezinjalo zesikhumba, iindlela zokuzilungisa zendabuko azikwazi ukujamelana nazo, kodwa ziya kuba nefuthe elihle kumaseli kunye nezicubu zemihlathi engaphantsi.
Umphezulu wesikhumba emva kokuba inkqubo yokugaya i-micro-grinding iphuculwe, kungcono kunikwe igazi. Ukongezelela, ithoni yesikhumba iphakama, ivuselela ukuhlanganiswa kwe-collagen, okwenza isikhumba sikhuphe kwaye siphumelele. Ukuhlambalaza, izikrakra kunye nemibimbi zinyamalale, kwaye ukunyusa okunyamezelayo kunye neesilayidi ezikhethekileyo kunye neekramidi kunceda ukuphucula inkqubo yokuvuselela nokukhupha isikhumba.
Yintoni enye i-microdermabrasion?
Namhlanje, i-microdermabrasion isetyenziselwa ukuxazulula iingxaki ezithile zesikhumba, kubandakanywa ukususa i-freckles. Ngethuba le nkqubo, iincinci ezincinci zincinci zisetyenziselwa phantsi kwengcinezelo kwesikhumba ukwenzela ukuba zisuswe iinqununu zecandelo eliphezulu lezakhi kwaye ngokukhawuleza ziqalise indlela yokuvuselelwa kwe-epithelial. Ngokutsho kwendlela yamakhemikhali, i-aluminium oxide i-crystal ayinobungozi emzimbeni, kuba ayinakonzakalisa ulusu aze ayicaphukise. Iifridi ze-aluminium oxide zineefom ezifanelekileyo ezinjengeenkwenkwezi zeqhwa okanye iinkwenkwezi kwaye zinezixhobo ze-hypoallergenic. I-Microcrystals, ngokukhawuleza xa ingena kwi-epidermis, ibuye ihlaziywe kunye neengqungquthela ezizikhuphayo (zisebenzise izixhobo zecavus). ukungathandeki, ukukhwaza okufutshane nje. Kwanele iiseshoni eziliqela ukubona ukuba kunjani isikhumba esikhulileyo esikhumbeni esitsha, emva kokuba zonke iiseli ezincinane emva kokuba inkqubo iqale ukukhula ngokukhawuleza. Ukulungelelaniswa komzimba kunye nokukhuthaza ukubunjwa kwamaseli amatsha kunokutshintsha ukubonakala - ulusu luba lolutsha, lukhangelekile kwaye lubutsha.
Kukho iindlela ezi-3 ze-microdermabrasion - indlela engundoqo, ephakathi kunye neleyo. Xa kuqhutywe i-crystals e-stérile engenakucatshulwa ngokupheleleyo ayifaki ukukhuselwa. Ikhosi yonke iquka iiseshoni ezi-5-6. Iiseshoni zigcinwe malunga neentsuku ezingama-7-14. Akukho zithintelo zeminyaka.
Ngoncedo lwe-microdermabrasion, imeko yesikhumba yentamo kunye nobuso, kunye nommandla wezandla kunye ne-décolleté, inokuphuculiswa kakhulu. Emva kokusetyenziswa kwexesha lokuqala, kucetyiswa ukuba kube ngaphantsi kwitalato, kubalulekile ukusebenzisa iindlela zokukhusela elangeni. Zama ukuphepha ukufumana imitha ecacileyo yelanga. Akukhuthazwa iintsuku ezimbalwa ukusetyenziswa.
Ukutshiza okukodwa kwesikhumba kunenkqubo engenabuhlungu, njengoko imithwalo yegazi ayithinti. Inkqubo ayibangeli nayiphi na imiphumo emibi okanye iingxaki. Ukubuyiselwa okanye ukujonga ngugqirha emva kokuba inkqubo ayifuni. I-Microdermabrasion inokwenziwa ngaphandle kwexesha lonyaka.Ngako ke, ukuba kukho umnqweno kwaye ukuba imithetho ethile iyahlonishwa, kunokwenzeka ukuba kuqhutywe i-micro-grinding yolusu kwindawo yendawo.
Ukuba inkqubo iyenziwa ekhaya, iindlela ezizodwa zokucoca izakufuneka, eziquka i-alumina crystals kunye nezinto ezikhuthaza ukuvuselelwa kwesikhumba. Inkqubo eyenziwa ekhaya ayiniki i-salon effect, kufuneka iqondwe, kodwa ngenxa yenkqubo inokwenzeka ukuba iphumelele ekupheliseni iiseli ezifileyo, zihlaziye ulusu kwaye zinike itoni. Emva kwenkqubo, i-reddening yesikhumba iyakwazi ukuba yinto ebonakalayo, edlalwa yileyure kwiyure.
Xa i-microdermabrasion isebenza ngokukodwa
Inkqubo ifanelekile kuzo zonke iintlobo zeekhumba ngaphandle kokunye. Inokwenzelwa abo banqwenela ukususa amabala e-pigmentation ebusweni babo, bavuselele isikhumba sabo esiqinileyo, esibi, benze izicathulo ezincinci kunye nemibimbi zingabonakali kangangoko. I-Microdermabrasion inokuthi iqhutywe kwinkcenkceshe ekhuselekileyo.
Le nkqubo ayikwazi ukuqhutyelwa phambi kwamacwecwe angaphiliyo emva kwee-herpe, ukutshisa, i-pink acne, i-warts. Ukutshatyalaliswa kukubonisa ubukhulu obuphezulu besikhumba, ubukho bezifo ezizimele kunye nesifo sikashukela.
I-diamond microdermabrasion yinkqubo eqhubela phambili eyabonakala kungekudala. Le nqubo iqhutyelwa kunye nokusetyenziswa kweebhokhwe ezinokutshafa idayimani. Ngethuba le nkqubo, izicatshulwa eziqingqiweyo zesikhumba zipheliswa ngendlela ephosakeleyo, emva koko ulusu luba lugugu, luphilile kwaye luncinci. Le nkqubo ayikho i-crystal, ngokwayo idibanisa isenzo sokucoca nge-laser-polished cutting cutting.
Izinzuzo zalo mgaqo zingenasiphelo, emva kwenkqubo eyenziwa ngumfazi angasetyenziswa ngokukhawuleza.
I-diamond microdermabrasion esebenzayo kunye ne-hyperpigmentation, i-seborrhea, i-hyperkeratosis, isikhumba esingenasiphelo, iintlobo ezininzi, ama-wrinkles kunye ne-scarfs. Le nkqubo isetyenziswe kakuhle emva kokususwa kwe-acne, kunye nekhumba elikhuni kunye neepolisi ezikhulisiweyo.
Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi, i-microdermabrasion ayikho i-panacea yazo zonke iziphoso ze-cosmetic kunye neengxaki zesikhumba, kwanokusetyenziswa kwethekhnoloji ephezulu. Ngoko ke, ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nenkqubo enjalo, kucetyiswa ukuba udibanise ne-cosmetologist enamava onokuvavanya uhlobo lobuthathaka kunye nokunyanga unyango olufanelekileyo.
Bonisa iimpawu: ngokukhawuleza ukubuyisela ubuhle nokutsha
Ukukhahlela ekhaya: izixhobo zesicelo kunye neereyiphi
Jongana nekhilimu enomthombo wokukhusela kwimilayezo ye-ultraviolet
Тредлифтинг - iteknoloji yokuvuselela ngokukhawuleza
Kwaye ukuphinda kube yimpumelelo yokuziphatha okanye uthathu kubaluleke kakhulu?
Isitya se-Crown of hostess - umvundla kwi-cream cream marinade
Ungonwabela njani umntu wakho?
I-Recipe ye-Beef Recipe
Indlela yokubuyisela u-elasticity kwesikhumba sebele?
I-Veal Tail Soup